ပန် (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ပန် သည် စနေဂြိုဟ်၏ သစ်ကြားသီးပုံစံရှိ အတွင်းပိုင်းအကျဆုံး ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၃၅ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး စနေဂြိုဟ်၏ A Ring ထဲ၌ တည်ရှိသည်။ ယင်းအား ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ၏ ပုံများမှတဆင့် Mark R. Showalter ဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယာယီအမည် S/1981 S 13 ဟုပေးခဲ့သည်။
View of Pan by Cassini in 2017.[မှတ်စု ၁]
↑ This photo of Pan was acquired by the Cassini spacecraft's narrow-angle Imaging Science Subsystem (ISS) camera on7March 2017. This view of the moon's northern hemisphere shows its walnut-like appearance, withahighly inclined equatorial ridge almost eclipsing the moon's southern hemisphere from view.
↑ Jacobson, R. A. (2008). "Revised orbits of Saturn's small inner satellites". Astronomical Journal 135 (1): 261–263. doi:10.1088/0004-6256/135/1/261. Bibcode: 2008AJ....135..261J.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission" (July 2010). Icarus 208 (1): 395–401. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025. Bibcode: 2010Icar..208..395T.
↑ Saturn - Moons။ NASA။5October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=413688" မှ ရယူရန်
၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၀၅:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၀၅:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။